नेप्से परिसूचक ७.४२ अंक घटेसँगै कारोबार रकम पनि घट्यो
असोज २८, काठमाडौं । बुधवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ७ दशमलव ४२ अंक घटेर १ हजार ५६१ दशमलव १७ विन्दुमा पुगेको छ ।
बुधवारको कारोबार दिनमा १९५ ओटा कम्पनीको ५२ लाख ९१ हजार ३१४ कित्ता शेयर २४ हजार ८९९ पटकमा रू. १ अर्ब ४९ करोड बरावरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
१९५ ओटा कम्पनीमध्ये ३० ओटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृछि भएको छ । त्यसैगरी १२७ ओटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने १२ ओटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
सर्वाधिक कारोबार सानिमा बैंकको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. ७ करोड २५ लाख बरावरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । कम्पनीले १३ दशमलव ३६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै शेयर खरीदविक्री धेरै भएको हो ।
कारोबारमा आएका १२ ओटा समुहमध्ये होटल्स समुहको परिसूचक शून्य दशमलव १४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने बाँकी समुहको परिसूचक घटेसँगै नेप्से घटेको हो । कारोबारमा आएका १२ ओटा समुहमध्ये विकास बैंक समुहको परिसूचक १ दशमलव ९९ प्रतिशत घटेको छ ।
बुधवारको कारोबार दिनमा सबैभन्दा बढी घलेम्दी हाइड्रोपावरका शेयरधनीले गुमाएका छन् । कम्पनीको शेयर मूल्य ७ दशमलव २६ प्रतिशत घटेको छ । दुई तिन दिन यताको बजार हेर्दा लगानीकर्ताहरुले प्रोफिट बुक गर्न थालेकाले बजार केहि तल झरेको देखिन्छ ।
नेप्से परिसूचक घटेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । मंगलवार रू. १ अर्ब ८१ करोड बरावरको शेयर खरीदविक्री भएकोमा बुधवार भने रू. १ अर्ब ४९ करोड मात्रको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।